Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Calzone na Pizza: Duo dị egwu
Emepụtara Batman Calzony site na ijikọta duo ike nke onye Pizza hụrụ n'anya: calzone na pizza. Ngwaahịa a nwere ụdị bat nwere profaịlụ ụtọ na-atọ ụtọ nke ụtọ bọta, calzone jikọrọ ọnụ nke jupụtara na galik ọcha ihendori, cheese, na pepperoni julienned, jikọtara ya na pepperoni pizza wee jee n'akụkụ Crazy Sauce®. Ihe nchịkọta nhọrọ ọhụrụ ga-adị maka $7.99 malite na Jenụwarị 24.
"Onye ọ bụla nwere ike weta vibes dike na abalị pizza site na ịnwale nke ọhụrụ Batman Calzony, "Jeff Klein, onye isi ahịa na Little Caesars kwuru, "Ọ bụ akụkụ kacha atọ ụtọ nke mmekọrịta anyị na ihe nkiri na-abịa. Batman. "
Little Caesars webatara Crazy Calzony na Ọgọst 2021 dị ka onyinye obere oge, na-agbakwunye ngwa ngwa ngwa ngwa na menu nke nwere usoro ahụ.
Ndị ahịa nwere ike ịtụ Batman Calzony maka nnyefe site na iji ngwa obere Caesars, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ tupu wee na-anakọta usoro ha nke ọma site na iji Pizza Portal® pickup (ụlọ ọrụ ekwentị na-ekpo ọkụ, nke na-arụ ọrụ nkeonwe) na ebe obere Caesars na-esonye. Ndị ahịa nwere ike kwụsị n'etiti elekere anọ ruo elekere asatọ nke mgbede iji bulie Batman Calzony n'ebughị ụzọ zụọ ya.
* gbakwunyere ụtụ ebe ọdabara. Dị n'ebe ndị sonyere. Ọnụ ahịa nwere ike ịdị iche. Ọnụ ahịa nwere ike ịdị elu na AK, HI, CA na saịtị ịntanetị ndị ọzọ. Nnyefe dị site na ebe ndị na-eso ya nwere naanị iwu ịntanetị. A na-akwụ ụgwọ nnyefe. Obere ego maka iwu ihe na-erughị $10.
BAỊRỊ OTU CAESARS®
N'ịbụ nke dị na Detroit, Michigan, Mike na Marian Ilitch tọrọ Little Caesars na 1959 dị ka otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ezinụlọ. Taa, Little Caesars bụ yinye pizza nke atọ kachasị n'ụwa, nwere ụlọ ahịa na steeti 50 US na mba na ókèala 27.
Amara maka Pizza HOT-N-READY® ya na Crazy Bread® ama ama, a na-akpọ Little Caesars "Uru Kachasị Mma na America" ​​n'ime afọ 14 gara aga (dabere na nyocha mba niile nke ndị ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke mba nke Sandelman & Associates mere - 2007 -2020 akpọrọ "Chain Rated Kachasị Elu - Uru maka Ego ahụ"). A na-eji ihe ndị dị mma eme obere ngwaahịa Caesars, dị ka nke ọhụrụ, nke na-adịghị oyi kpọnwụrụ, mozzarella na cheese Muenster na ihendori nke sitere na tomato mkpọchara ọhụrụ, nke osisi vine ripened California.
Otu ụlọ ọrụ na-eto eto dị elu nke nwere ihe karịrị afọ 60 nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ pizza $ 145 ijeri ụwa, Little Caesars na-achọkarị ndị na-aga franchise ka ha sonyere ndị otu anyị na ahịa gburugburu ụwa. Na mgbakwunye na ịnye ohere maka nnwere onwe nke ọchụnta ego n'ime usoro aha aha, Little Caesars na-enye mmata siri ike na otu n'ime agwa ama ama na ọmarịcha agwa na mba ahụ, Little Caesar.
Foto ndị Warner Bros na-egosi 6th & Idaho/Dylan Clark Productions Production, ihe nkiri Matt Reeves, "The Batman." A ga-emepe ihe nkiri a na ụlọ ihe nkiri mba ụwa malite na Machị 2 yana na mba 4 Maachị 2022; a ga-ekesa ya n'ụwa niile site na Warner Bros. Pictures.
Ihe ngosi TV ọkacha mmasị nke Brits na-atụnye ụtụ na nnukwu arụkwaghịm
Saint Lucia kwụsịrị ule maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, tupu…
Brilliant Hotel Man na-ewu Palmer House na Chicago na ...
Heathrow: Ọganihu malitere na 2022, mana mgbanwe…
Brand Hyatt ọhụrụ na Memphis
Ihu dị n'azụ atụmatụ ime njem nlegharị anya Montenegro ọhụrụ
Ebe ngosi nka ụgbọ elu Pearl Harbor mepere akara ngosi WWII nke mbụ…
Ememme Koh Samui Jazz na-ekwupụta mmemme na-atọ ụtọ
Ịkụnye ụbụrụ nwere ike inye aka na ALS mkpọnwụrụ
New Somalia, Onye isi ala ọhụrụ bụ ohere maka ...
Ike nke ịpụ apụ maka ahụike uche ka mma
Dementia na-eto eto na-emetụta ihe karịrị mmadụ 1200